जागिर छोड्दा पनि पैसा बुझाउँनु पर्ने ? – Insurance Khabar
जागिर छोड्दा पनि पैसा बुझाउँनु पर्ने ?
प्रकाशित मिति : २३ पुष २०७५, सोमबार ०९:३५
नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको संख्या ४० पुगेको छ । नयाँ कम्पनीहरु थपिएसँगै कर्मचारीको खोसाखोसको प्रक्रिया अझै रोकिएको छैन । नयाँ कम्पनीहरुले सामान्य तहको कर्मचारीलाई पनि उच्च पद र सुविधा दिन थालेपछि सबै कर्मचारीहरु अवसरको खोजीमा दौडन थालेका हुन् ।
तर, कर्मचारी गुमाउँनु पिडा भोेगी रहेका पुराना कम्पनीहरुले भने यसरी छोडेर जाने कर्मचारीसँग रकम असुल्न थालेका छन् । कम्पनीका कर्मचारीहरुका अनुसार कम्पनीहरुले कर्मचारीको तह अनुसार रकम भरपाई गराएर मात्र जागिर छोड्न दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार जुनियर असिसटेण्टले ५० हजार रुपैयाँ पुराना कम्पनीलाई बुझाएर मात्रै जागिर छोड्न दिईएको छ । त्यस्तै, असिसटेण्टलाई १ लाख, सिनियर असिसटेण्टको १ लाख ५० हजार, सुपरभाईजरलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लगाईएको छ । साथै जुनियर अफिसरले भने जागिर छोड्नु परेमा २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीहरुले एक्कासी जागिर छोड्न थालेपछि पुराना कम्पनीले यस्तो जुक्ती निकालेका हुन् ।